Oge ezumike site gburugburu ụwa
Ọrụ nlekọta na gburugburu ụwa na-enye ọrụ maka ịzụta nche na ụlọ ahịa na Europe, US, Hong Kong na Singapore. A na-azụ ahịa nanị na ụlọ ahịa ndị a ma ama, boutiques ma ọ bụ site n'aka ndị na-emepụta ihe.
A na-ebufe ngwongwo site na nnyefe ọrụ nke aka anyị, nke na-eme ka ọrụ ngwa ngwa dị.
A na-akwụ ụgwọ nke ngwaahịa bara uru ruo 15.000 rubles na Russia na nkwụnye ego. Ngwaahịa dị oke ọnụ karịa 15.000p. nke a na-ebute ma ọ bụ zuru ezu.
Ịga na Kazakhstan na Belarus
Nnyefe site na ụlọ ọrụ njem. 100% nkwụnye ụgwọ.
Nnyefe na mba ndị ọzọ nke ụwa
Ọ bụrụ na ịchọrọ nnyefe na mba gị, mee nbudata mbido maka nnyefe.
Ntinye nke ngwaahịa bụ ọnụahịa 1500 dị ọnụ ọnụ
A na-ewepụta ndị dị oké ọnụ ahịa site na onye ozi onwe gị. Kọwaa ego na ohere nke nnyefe site n'ikuku ozi-elu.
Ị nwere ike ịnye ihe ọ bụla bara uru ruo euro 7500. Ngwaahịa dị oke ọnụ karịa euro 7500 adịghị eweta Russia n'ihi mgbochi omenala, ma ọ bụ na-agbaso iwu omenala nke 30% nke uru nke ngwaahịa ahụ. Ịnyefe na mba ndị ọzọ dịka iwu omenala obodo gị si dị.
Site n'enyemaka nke ọrụ a ị nwere ike ịzụta eserese na ngwaahịa ndị ọzọ na ụlọ ahịa na Hong Kong, Germany na mba Europe ndị ọzọ, yana USA na Singapore. Na mgbakwunye na eserese, ịnwere ike ịnye ihe ọ bụla metụtara ngwaahịa maka onwe onye nke a na-apụghị ịzụta na Russia na CIS.
Ọ bụrụ na ịchọtaghị ngwaahịa ịchọrọ, ma eleghị anya, ọ bụghị na katalọgụ anyị, zite ya njikọ site na ụlọ ahịa ọzọ n'ụwa ma anyị ga-agbakọọ nnyefe gị na adreesị gị.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ndị ọzọ ma ọ bụ ọ bụrụ na ị nwere onyinye maka imekọ ihe ọnụ, dee anyị na info@watch-edition.ru